uMasipala nabaculi bapiklelane kungcwatshwa umajotha - Ilanga News
Home Izindaba uMasipala nabaculi bapiklelane kungcwatshwa umajotha
uMasipala nabaculi bapiklelane kungcwatshwa umajotha
IGCOKAMA Elisha (elifake ishethi elimhlophe) litheleke lihambisana nanoNgizwe Mchunu (ofake umqhele) emngcwabeni kaMajotha obekwe
endlini yakhe yokugcina izolo KwaMaphumulo. Enkonzweni yokufihla lo mculi kupiklelane imeya yakule ndawo nabaculi bakamaskandi kanti
iGcokama lifike lashiya insavunsavu yemali labe selibona elifike ngayo. Udaba ekhasini 3. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UPHENDUKE isigcawu sokuphikisana ngamazwi phambi kwezi-ndimbane zabalandeli umngcwabo womculi kamasikandi, uZithulele “Majotha” Zungu (39), othunwe izolo ngeSonto endaweni yaseKhu-kho, oYengweni, KwaMaphumulo.
Kukhwelwe kwadilikwa kumasipala waKwaMaphumulo osolwe ngokuthi ubulandelelwa, ungafuni ukufaka isandla ukuze kungcwa-tshwe lo mculi ekubeni (lo mculi) ubeyiphakamisa indawo yaKwa-Maphumulo.
Kuthe kusenjalo yangena nayo esiteji iMeya yalo masipala, uNkk Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini, yathi kakuwona umsebenzi wabo bewumasipala ukungcwaba.
“Ngisho kungashona ikhansela kakusiwona umsebenzi wethu ukungcwaba ngoba kasinalo uhlelo olunjalo emkhandlwini.
“Selokhu kwavela izindaba zokushona kukaMajotha, besilo-khu sixhumana nomndeni, sathu-mela nekhansela, nawo uyazi ukuthi kungakanani esiwulekelele ngakho siwumasipala.
“Uma silethe usizo kasishuthi izithombe sibonise izwe, kodwa esikwenzayo wukubhala phansi sikuqophe esikwenzile. Sibonile uKhuzani Mpungose efikile lapha emndenini elethe isheke kodwa thina asishuthi,” kusho uNkk Khuzwayo-Dlamini.
Kungene umculi kamasikandi uSgwebo Sentambo, watshela izi-nkumbi zabantu ukuthi umasipala umsebenzi wawo wukuxhasa.
“UKhuzani bekufanele ashuthe ngoba ubexhasa ngemali yakubo kwaMpungose, umasipala bekufa-nele umngcwabe uMajotha njengoba kuza ukhetho nje, azolokhu esingqongqozela endlini amakha-nsela, ebanga isicefe efuna ukuvotelwa, kodwa uma kumele kungcwatshwe umuntu, kuba ne-nkinga. Ngiphendula imeya ngale nkulumo yayo ebikade iyenza lana,” kusho uSgwebo.
UMajotha udlule emhlabeni emasontweni amabili adlule. Ushiye izingane eziwu-6. Ugule isikhashana wangeniswa esibhe-dlela iKing George, eThekwini, kwamenela.
Umndeni walo mculi ukhwele wadilika ezintathelini, uthi kawuzange uphatheke kahle ngemibiko ebikwe ngalo mculi.
Phakathi kwabaculi abafikile emngcwabeni kubalwa uMthande-ni “iGcokama Elisha” Manqele okuthe efika, waqonda eduze kwebhokisi wabeka inqwaba ye-mali maqede waphuma wahamba engazange ahlale phansi.
bekukhona uNtencane, uMala-hle, uQhosha, uCevuzile, uBahu-bhe, uDulasi, uGadla, uSmomoza, uPolo, uVezuthando kaVezutha-ndo, uNkomoziyophuza, uSgwebo, uMzukulu kaNyathela, Amalaba-theka nabanye.
UMajotha ugcine engcwatshwe mahhala yinkampani yabangcwabi, iKwelamathongo Funeral Services.
Previous articleZiqinile izinsolo zokudlwengulwa entombazaneni ebigqitshwe egodini(14)
Next articleIndoda ‘igwaze yabulala’ indodana (9) yazilengisa